Qaramada Midoobay oo war ka soo saartay kulankii Shalay ee wakiilka Qaramada Midoobay iyo Lafta garaan | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Qaramada Midoobay oo war ka soo saartay kulankii Shalay ee wakiilka Qaramada...
Wafdi ka socda Qaramada Midoobay (QM) ayaa maanta booqday Dowlad-Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya si ay ugala hadlaan qaababka ay QM uga caawin karto dawlad-goboleedka dhinacyo badan sannadka 2021.
“Waa booqashadeenii ugu horreysay ee aan ku tagno Dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah Federaalka sanadka cusub, waxaana u nimid in aan kala hadalno Madaxweynaha iyo wasiirradiisa howlaha Qaramada Midoobay ee ku aaddan taageerada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed. Taageeradaas oo isugu jirta dib-u-heshiisiinta socota, amniga iyo dadaallada xasilinta iyo gargaarka ban’aadamnimada iyo horumarinta,” ayuu yiri Xoghahaya Guud ee Qaramada Midoobau u qaabilsan Soomaaliya, Danjire James Swan.
Ergeyga Qaramada Midoobey ayaa ka hadlayey shir jaraa’id oo ay si wada jir ah u wada qabteen Madaxweynaha Dowladaha Xubnaha ka ah Federaalka Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed ‘Laftagareen.’
Madaxweynaha, Madaxa Ergada Caalamiga ee Socdaalka (IOM) ee Ergeyga Soomaaliya, Richard Danziger, iyo, Xafiiska UN-ka ee Xiriirinta Arrimaha Bani&#39;aadamnimada, Madaxa Gargaarka Bani’aadamnimada. Unugga Isku-Xirka Helitaanka iyo Madaniga ee Soomaaliya, Edward Melotte.
“Waxaan sidoo kale si gaar ah u weheliyay waftigan si aan u dhagaysto waxa maamulka Koonfur Galbeed ka rajaynayo kana filayo Qaramada Midoobay sanadka 2021 si aan si fiican uga wada shaqayno si loo hubiyo baahida dadka, iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed. , sidoo kale waa la kulmay, ”Mudane Swan ayaa intaas ku daray.
Taageerada Dawlad Goboleedka Koonfur Galbeed
Mar uu jeedinayey kelmeddiisa, Wakiilka Gaarka ah ee Qaramada Midoobay wuxuu bidhaamiyey tusaalooyinka qaar ka mid ah taageerada maxalliga ah ee hay’adda adduunka, isaga oo intaa ku daray in qaar ka mid ah mashaariicda hal-abuurka ah ee hadda socda ay yihiin habab ogeysiin kara howlaha Qaramada Midoobay meelaha kale oo Soomaaliya ah.
Mashaariicda waxaa ka mid ahaa Xafiiska Taageerada QM ee Soomaaliya (UNSOS) iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ka wada shaqeynaya sidii loo horumarin lahaa deegaanka maxalliga ah iyada oo loo marayo qorshe lix milyan oo geed loogu beero guud ahaan Soomaaliya, iyadoo ilaa 200,000 oo ka mid ah geedahaas lagu beeri doono agagaarka Baydhabo.
James Swan waxa uu ka hadlay sida Qaramada Midoobay ay ula shaqeyneyso saaxiibada maxalliga ah sidii loo yareyn lahaa raadkeeda deegaan iyo taageeridda u badalida wax soo saarka tamarta mid la cusboonaysiin karo. Wuxuu hoosta ka xariiqay sida heshiis ay hore u saxiixeen UNSOS iyo shirkad gaar loo leeyahay ay gogol xaar ugu tahay in tamarta qorraxda la gaarsiiyo xerada midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay ee magaalada Baydhabo iyo waliba suuqa guud ee baydhabo.
“Soolar Baneel-ka qoraxda ayaa la dhigi doonaa dabayaaqada sanadkan,” ayuu yiri.
Marka la eego tirada badan ee barakacayaasha gudaha iyo hareeraha magaalada Baydhabo – oo tiradoodu lagu qiyaasay 500,000 – Swan wuxuu ka hadlay howlaha IOM ay la leedahay saaxiibada si xal waara loogu helo, taas oo ay ka mid tahay horumarinta degaan cusub oo u dhow magaalada Barwaaqo.
“Deegaankan waxaa lagu wajahay in ay yihiin qayb isku dhafan oo leh jawi magaalo, waxaana loo qorsheeyey sidii loo kordhin lahaa magaalooyinka, halkii laga dhisi lahaa xerooyinka ku meel gaarka ah ee laga jaray magaalada. Illaa iyo hadda, in ka badan 700 oo qoys ayaa la dajiyay halka kun kale oo qoysna ay dhowaan ku soo biirayaan, ”ayuu yiri Md. Swan. Deegaankan waxaa qeyb ka ahaan doona adeegyada aasaasiga ah, sida xarumaha caafimaadka iyo tashiilaadka fayadhowrka, dugsiyada iyo sidoo kale saldhigyada booliiska iyo waddooyinka.”
Kulankan uu la qaatay Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo xubno ka tirsan kooxdiisa ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay arrimaha gargaarka bani’aadanimo Ergayga Qaramada Midoobay, waxa uu kelmeddii uu warbaahinta siiyay ku xusay in furitaanka hawada si ay awood ugu siiso kaalmada bani’aadamnimo ee aan laga hor istaagin dadka nugul ay weli u tahay walaaca ugu weyn.
Wuxuu sheegay in uu soo dhaweynayo isla markaana uu dhiirigalinayo “Dadaalka dowlad gobolleedka ee sii wadidda taageerada si loo xaqiijiyo loona joogteeyo amaanka goobaha duulimaadyada guud ahaan ee Koonfur Galbeed.”
Wadaxaajoodkii Madaxweyne Cabdicasis waxaa sidoo kale looga hadlay xaaladaha siyaasadeed ee uu dalka maryo, taa oo ay qeyb ka tahay doorashada dalka.
Ergeyga Qaramada Midoobay waxa uu dhankiisa muujiyey In uu ku faraxsanyahay dadaalada ay wadaan madaxda Koonfur Galbeed ee ku aadan dib u heesheesiinta six al waara loo helo.
Horraantii toddobaadkan, saaxiibada Soomaaliya oo dhan oo ay qayb ka yihiin, Qaramada Midoobay ayaa soo saaray war-murtiyeed ay ku muujinayaan walaaca ay qabaan caqabadaha sii xoogeeysanaya ee hortaagan heeshiiskii doorasho ee 17 September 2020 ee ay gaareen Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ‘Farmaajo’ iyo Madaxda Maamul Goboleedyada.
“Waxaan idibku dhiirinayaa wada shaqeyn, taa oo ka dhigan in danta dalka laga hormariyo tan shaqsiyadeed” ayuu yiri Mr. Swan “Qaramada Midoobay waxay madaxda Soomaaliyeed ku dhiirineysaa in ay taageeraan dadaal kasta oo lagu wada hadlaayo, si loo xaqiijiyo habsami u socodka doorashada, taas oo ku saleysan is afgarad salka ku haya heeshiiskii 17 Sebteember, isla markaana ay u noqoto doorasho ku saleysan cadaalad iyo mid daah furan.”
Gabagabadii kelmeddiisa waxa uu hoosta ka xariiqay ‘in kasta oo uu Convid-19 sii yaraanayo, hadana weli Soomaaliya kama uusan guurin. Waxuu xusay muhiimadda ay leedahay taxadarka iyo in la sii wado tallaabooyinka looga taxadarayo xanuunkan.
Qaramada Midoobay waxa ay sii wadi doontaa ilaaladeeda ku aadan masuuliyiinta caafimaadka ee ka hawlgala Koonfur Galbeed iyo Maamul Goboleedyada Soomaaliya oo dhan ilaa iyo inta loo baahanyahay” ayuu Mr. Swan ku daray.
Previous articleSheekada nin Soomaali ah oo si “caddaalad darro ah” loogu daldalay Britain
Next articleMaxkamada Ciidanka Qalabka sida oo amartay in la soo xira dadkii xasuuqay reer Guriceel
Hey’adda Qaramada oo sheegtay in kumanaan dad gaaraya iney ku...
Hey’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan dhanka arrimaha bani’aadanimada, ayaa war ay soo saartey sheegtay kumanaan dad gaaraya iney ku barakaceen dagaalkii Wisil ee gobolada...
Hoggaamiyihii kooxda maleeshiyaadka Boko Boko Xaraam ee la dagaalama Nigeria...
Golaha Xuquuqul Insaanka Qaramada Midoobay oo sheegay in baaritaan lagu samaynayo...
Sheekh Shariif oo soo saaray bayaan deg-deg ah oo uu kaga...